I-Low Spread Forex Broker - Abathengi Abcono kakhulu be-Forex Ukuhweba Ama-Spreads
Ikhaya / Mayelana / Kungani FXCC / sisabalala
Ukusabalala kungenye yezimo eziyinhloko zokuhweba nokutshala imali ku-Forex. Kufanele wazi ukuthi ukusakazwa kwe-Forex uma ufuna ukuhweba emakethe yokushintshaniswa kwamanye amazwe.
Ukusabalala kuyizindleko abathengisi ababhekana nazo kukho konke ukuthengiselana. Uma ukusabalala kuphezulu, kuzoholela ekukhuphukeni kwezindleko zokuhweba okuzogcina kunciphise inzuzo. I-FXCC i-broker elawulwayo enikeza ukusabalala okuqinile kumakhasimende ayo.
Yini okusakazwa ku-Forex?
Ukusabalala umehluko phakathi kwentengo yokuthenga nentengo yokuthengisa yefa.
Emakethe ejwayelekile yemali, amadili enziwa ngaso sonke isikhathi, kepha ukusabalala akuhlali njalo kuzo zonke izikhundla. Ukuqonda ukuthi kungani lokhu kwenzeka, kufanelekile ukuqonda umehluko phakathi kwamanani wokuthenga nokuthengisa imali lapho uhlola ukuhweba, nakho okunquma ukwenziwa kwemali emakethe.
Emakethe yamasheya naku-Forex, ukusabalala umehluko phakathi kwentengo yokuthenga nokuthengisa. Ukusabalala ku-Forex umehluko phakathi kwentengo yokubuza nentengo yebhidi.
Yini ibhidi, buza, nobudlelwano bayo nokusabalalisa?
Kunezinhlobo ezimbili zamanani emakethe:
Ibhidi - inani umthengi wefa lemali ahlela ukulisebenzisa.
Buza - intengo umthengisi wempahla yemali ahlela ukuyamukela.
Futhi ukusabalala ngumehluko phakathi 'kwebhidi nokubuza' okukhulunywe ngaphambili okwenzeka ngesikhathi sokuthengiselana. Isibonelo esihle sobudlelwano obusobala bemakethe ukubhida nge-bazaar lapho kubekwa intengo ephansi bese umthengi wesibili ehambisana nezidingo eziphakeme kakhulu.
Yini ukusabalala kwe-Forex kusuka ohlangothini lomthengisi?
Ngokombono womthengisi online, ukusabalala kwe-Forex kungenye yemithombo engenayo eyinhloko, ngamakhomishini kanye nokushintshaniswa.
Ngemuva kokuthi sifunde ukuthi ukusabalala ku-Forex, ake sibone ukuthi kubalwa kanjani.
Ukusabalala kubalwa kanjani ku-Forex?
Umehluko phakathi kwentengo yokuthenga nentengo yokuthengisa ulinganiswa ngamaphoyinti noma amapayipi.
Ku-Forex, ipayipi yidijithi yesine ngemuva kwephoyinti lesilinganiso sokushintshaniswa. Cabanga ngesibonelo sethu sezinga lokushintshaniswa kwe-euro 1.1234 / 1.1235. Umehluko phakathi kokunikezwa nokufunwayo ngu-0.0001.
Lokho wukuthi, ukusabalala kuyipayipi elilodwa.
Emakethe yamasheya, ukusabalala umehluko phakathi kokuthenga nokuthengisa intengo yesibambiso.
Usayizi wokusakazeka uyehluka kumthengisi ngamunye nangokungazethembi kanye namavolumu ahambisana nensimbi ethile.
Okuthengiswa kakhulu lwemali pair yi-EUR / USD futhi imvamisa, ukusabalala okuphansi kuyi-EUR / USD.
Ukusabalala kungalungiswa noma kuntanta futhi kulingana nenani elibekwe emakethe.
Wonke umthengisi oku-inthanethi ushicilela ukusabalala okujwayelekile ekhasini Lokucaciswa Kwenkontileka. Ku-FXCC, ukusakazeka kungabonakala ku 'ukusabalala okuphakathi ngempumeleloikhasi. Leli ithuluzi elihlukile elikhombisa umlando wokusabalala. Abahwebi bangabona ama-spikes asakazekile nesikhathi se-spike ngokubuka okukodwa.
Isibonelo - ukubala kanjani ukusabalala
Usayizi wokusabalala okhokhelwe ngama-euro kuya ngosayizi wesivumelwano osithengisayo nenani lepayipi ngenkontileka ngayinye.
Uma sicabanga ukuthi ukubala kanjani ukusabalala ku-Forex, ngokwesibonelo, inani lepayipi ngenkontileka ngayinye ngamayunithi ayishumi emali yesibili. Ngokwemigomo yedola, inani lingu- $ 10.
Amanani wepipi nosayizi wenkontileka kuyahlukahluka kusuka kumthengisi kuya kumthengisi - qiniseka ukuthi uqhathanisa imingcele efanayo lapho uqhathanisa ukusabalala okubili nabathengisi ababili abahlukene bokuhweba.
Ku-FXCC, ungasebenzisa ifayela le- i-akhawunti yedemo ukubona ukusabalala kwesikhathi sangempela endaweni yesikhulumi noma ukubala ukusabalala usebenzisa umshini wokubala wokuhweba.
Izici ezithinta usayizi wokusakazeka ku-Forex
Yiziphi izinto ezithinta ukusabalala kokuhweba?
Ukushiswa kwensimbi enkulu yezimali
Ivolumu yokuhweba kuthuluzi lezimali
Ukusabalala kwama-CFD kanye ne-Forex kuncike kwimpahla eyisisekelo. Lapho kuthengiswa impahla ngenkuthalo enkulu, imakethe yayo ingoketshezi ngokwengeziwe, lapho abadlali beba baningi kule makethe, kuzovela izikhala ezincane. Ukusabalala kuphezulu ezimakethe ezingamanzi kakhulu njengamabhangqa emali exotic.
Ngokuya ngokunikezwa ngumthengisi, ungabona ukusabalala okungaguquki noma okuguqukayo. Kumele kuqashelwe ukuthi ukusabalala okungaguquki akuvamisile ukuqinisekiswa ngabathengisi ngezikhathi zokuntengantenga kwemakethe noma kwezimemezelo ze-macroeconomic.
Ukusabalala kuyahlukahluka kuye ngezimo zemakethe: ngesikhathi sesimemezelo esibalulekile se-macro, ukusabalala kuyanda, futhi abathengisi abaningi abaqinisekisi ukusabalala ngesikhathi sezimemezelo nangesikhathi sokuguquguquka.
Uma ucabanga ngokuhweba ngesikhathi somhlangano we-European Central Bank noma ngenkathi i-Fed inesimemezelo esibalulekile, ungalindeli ukuthi ukusabalala kuzofana njengokujwayelekile.
I-akhawunti ye-Forex ngaphandle kokusabalala
Ngabe uyazibuza ukuthi kungenzeka yini ukuhweba nge-Forex ngaphandle kokusabalala?
Ama-akhawunti e-ECN ama-akhawunti enziwa ngaphandle kokubamba iqhaza komthengisi. Unokusabalala okuncane kuphela kule akhawunti, isibonelo, amapayipi angu-0.1 - 0.2 ku-EUR / USD.
Abanye abathengisi babiza imali engaguquki yenkontileka ngayinye ephelile kepha i-FXCC kuphela izindleko ezisakazwayo futhi akukho khomishini.
Ukusabalalisa okuhle kakhulu kwe-Forex, kuyini?
Ukusabalala okuhle emakethe ye-Forex ukusabalala kwe-interbank.
Ukusabalala kwe-interbank forex ukusabalala kwangempela kwemakethe yezimali zamanye amazwe kanye nokusabalala phakathi kwamazinga okushintshaniswa kwe-BID ne-ASK. Ukufinyelela ekusakazekeni kwe-interbank, udinga i- STP or I-akhawunti ye-ECN.
Ungakuthola kanjani ukusabalala ku-MT4?
Vula Ipulatifomu yokuhweba ye-MetaTrader 4, iya kusigaba se- "Market Watch".
Unokufinyelela ezindleleni ezimbili ezifakiwe ngokuzenzakalela kungxenyekazi yokuhweba ye-MT4:
Qhafaza kwesokudla endaweni yokubuka emakethe bese uchofoza ku- “spread”. Ukusabalala kwesikhathi sangempela kuzoqala ukuvela eceleni kwebhidi kanye nentengo yokubuza.
Eshadini lokuhweba le-MT4, chofoza kwesokudla bese ukhetha "Izakhiwo," bese, ewindini elivulekayo, ukhethe ithebhu "Okuvamile", uthikhe ibhokisi eliseduze kwe- "Show ASK line," bese uqhafaza ku- "OK."
Kuyini ukusabalala kwe-Forex - okushiwo ukusabalala ekuhwebeni?
Umhwebi ngamunye unezinga lakhe lokuzwela ezindlekweni zokusakazeka.
Kuya ngecebo lokuhweba elisetshenzisiwe.
Isikhathi esinqunyiwe sincane futhi nenani lemisebenzi liyancipha, kufanele uqaphele kakhulu uma kukhulunywa ngokusabalala.
Uma ungumthengisi we-swing ofuna ukuqoqa inani elikhulu lama-pips ngaphezulu kwamasonto noma ngisho nezinyanga, usayizi wokusabalala awunamthelela omncane kuwe uma kuqhathaniswa nosayizi wokuhamba. Kepha uma ungumdayisi wosuku noma we-scalper, ubukhulu bokusabalala bungalingana nomehluko phakathi kwenzuzo yakho nokulahleka kwakho.
Uma ufaka njalo futhi uphuma emakethe, izindleko zokuthengiselana zingangeza. Uma leli kuyisu lakho lokuhweba, kufanele ubeke ama-oda akho lapho ukusabalala kulungile.